OUKITEL K7: Fitaovana vaovao misy batterie 10.000 mAh | Androidsis
OUKITEL K7: Ny telefaona vaovao miaraka amin'ny bateria 10.000 mAh
Eder Ferreno | | Finday, Oukitel
Vao tsy ela akory izay, ny OUKITEL dia nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ny findainy vaovao, ny K10. Modely miavaka amin'ny batterie 11.000 mAh goavambe. Toa mikendry an'ity ampahan'ny fitaovana ity miaraka amin'ny bateria lehibe ny orinasa. Satria ny maodely vaovao, ny OUKITEL K7 dia miavaka amin'ny bateria 10.000 mAh ihany koa. Safidy tsara ho an'ireo izay mitady telefaona misy bateria lehibe.
Modely iray lehibe ho an'ny orinasa izy io, satria fantatr'izy ireo atambatra ny famolavolana miaraka amina fampiasa maro ao amin'ity OUKITEL K7 ity. Telefaona mety ho an'ny olona mampiasa telefaona be dia be, satria amin'ity fomba ity dia hankafy fizakantena lehibe tokoa izy ireo amin'ny fotoana rehetra.
Hanomboka amin'ny fomba ofisialy eny an-tsena ny telefaona amin'ny faran'ity volana Mey ity. Noho izany, mbola tsy ananantsika rehetra ny antsipiriany momba izany. Na dia efa mahalala fampahalalana kely aza isika, ankoatry ny famolavolana ilay fitaovana. Volavola izay miavaka amin'ny maha-tsotra sy kanto azy. Ka OUKITEL dia nahavita asa lehibe tamin'io lafiny io.
Ny OUKITEL K7 dia antenaina hanana bateria 6-inch miaraka amin'ny vahaolana Full HD (2.160 x 1.080 teboka). Avy amin'ny zavatra hitantsika ihany koa fa hanana tahan'ny efijery 18: 9 izy, manana zana-kazo manify sy vatana mahia. Noho izany dia milamina ny mitazona ny telefaona amin'ny tanana iray.
Araka ny efa nolazainay, ny bateria dia miloka amin'ny bateria 10.000 mAh, izay ny kintana amin'ny telefaona. Amin'ny fiampangana azy feno dia afaka maharitra mihoatra ny herinandro ny OUKITEL K7. Ka manana fizakan-tena mandritra ny fotoana fohy isika. Inona koa, ny fitaovana dia hanana RAM 4 GB sy fitehirizana anatiny 64 GB. Manana toerana malalaka koa isika.
Amin'ny faran'ny volana Mey na ny fiandohan'ny volana Jona amin'ity OUKITEL K7 ity dia antenaina hamaky fivarotana. Azo antoka ao anatin'ny roa herinandro dia ho fantatra bebe kokoa amin'ny fomba mivaingana, ankoatry ny famaritana feno azy. Mandritra izany fotoana izany, izay rehetra liana amin'ny telefaona dia afaka manavao ny vaovao hatrany amin'ny alàlan'ny fidirana ao amin'ny tranonkalan'ny orinasa, amin'io ihany rohy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » OUKITEL K7: Ny telefaona vaovao miaraka amin'ny bateria 10.000 mAh
LG G7 ThinQ: ofisialy izao ny ofisialy avo lenta
Ny fampiharana fitsapana haingana indrindra ho an'ny Android maimaim-poana sy tsy misy doka